RAL रंग चार्ट: आफ्नो रंग छनौट गर्नुहोस् सजाउनुहोस्
RAL रंग चार्ट: आफ्नो रंग छनौट गर्नुहोस्
हामी सबै परिचित छौं रंग चार्ट प्यानटोन। यो भित्री सजावटमा सबै भन्दा बढी प्रयोग गरिएको प्रणाली हो, तर केवल एक मात्र होईन कि एक नम्बरित र color्ग गाइड प्रस्तुत गर्दछ। प्यानटोन बाहेक, सिलाब, आईआरएएम र आरएएल प्रणालीहरू केहि क्षेत्रहरू द्वारा मान्यता दिइन्छ, तर हामी मध्ये धेरै जसो होइन। आज सम्म!
1 RAL के हो?
1.1 RAL संग्रह
2 आन्तरिक सजावटमा यसको प्रयोग
RAL के हो?
RAL एक यूरोपीय र matching मिलान प्रणाली हो; एउटा संख्याको र color्ग गाईड इन अनुप्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको उद्योग को विभिन्न शाखाहरुजस मध्ये मुख्यतया पेन्ट्स, प्लास्टिक र कोटिंग्सको निर्माण र वितरण हो।
जर्मन शब्दहरू, रेख-अस्चु फर फर लाइफरबेडिun्गन, जसलाई स्पेनी भाषामा अनुवाद गर्न सकिन्छ 'डेलिभरी कन्डिसन र क्वालिटी म्यानेजमेन्ट राष्ट्रिय आयोग' भनेर अनुवाद गरिएको, यो संक्षिप्त नाम आरएल हो। को लागी एक संक्षेप मानक रंगहरू RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung द्वारा प्रशासित।
१ 1927 २40 मा जर्मन संगठन RAL ले colors० र colors्गको संग्रह सिर्जना गर्‍यो। उद्देश्य बाहेक अरू केहि थिएन किनकि संख्याहरूमा निर्भर हुनु र यी प्रत्येक समूहको सेटको आधारमा प्रत्येक र color परिभाषित गर्नु थियो। त्यसपछिका वर्षहरूमा, संग्रहमा नयाँ र wereहरू थपियो, जुन १ 1961 in१ मा संशोधित भयो र "RAL 840०-HR" भनिन्थ्यो। रंग प्रणाली मा त्यो क्षण देखि थियो २१213 रंग, जुन आज पनि लागू छ। यद्यपि, «RAL 840-HR» दायराले केवल म्याट र coveredहरू मात्र ढाकेको थियो, १ 80 s० को दशकमा AL RAL 841 193१-GL ​​the लाई प्रकाश, चमकदार सतहहरूको लागि दायरा, १। Colors रंगहरूमा सीमित देख्यो।
यस RAL क्लासिक चार्ट का सबै रंगहरू एक द्वारा पहिचान गरिएको छ Digit अंक नम्बर, जहाँ पहिलो परिवार वा मुख्य कुञ्जी हो। १: चिल्लो, २: सुन्तला,:: रातो,:: बैजनी,:: निलो,:: हरियो,:: खरानी,:: खैरो,:: कालो र सेतो। यो सबैभन्दा प्रख्यात र व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको प्रणाली हो तर एक मात्र होईन। RAL डिजाइन, RAL प्रभाव र RAL प्लास्टिक संग्रहले अधिक र color भिन्नता प्रदान गर्दछ।
RAL डिजाइन: १ 1993 1688 In मा RAL ले एक नयाँ र color्ग एकीकरण प्रणालीको आविष्कार गर्‍यो, जुन वास्तुकार, डिजाइनर र विज्ञापनकर्ताहरूको आवश्यकता अनुरूप थियो। RAL डिजाइन संग्रह पछि १,7 रंगहरू समावेश गर्दछ। अघिल्लो प्रणालीहरूको विपरित, RAL डिजाईनको कुनै नाम छैन र यसको संख्या CIELAB रंग स्थानको आधारमा योजना पछ्याउँदछ। प्रत्येक र color2अंकले प्रतिनिधित्व गर्दछ, एक ट्रिपल र २ जोडीमा समूहीकृत, क्रमशः ह्यु, ब्राइटनेस, र संतृप्ति प्रतिनिधित्व गर्दछ। RAL क्लासिक र RAL डिजाईन र inters्ग काँटछाँट गर्दैन।
RAL प्रभाव: RAL प्रभाव 420 ठोस रंग र 70 धातु रंगहरु को समावेश गर्दछ। यो पहिलो RAL संग्रहण पानीमा आधारित पेंट प्रणालीमा आधारित छ जसमा कुनै भारी धातुहरू जस्तै सीसा, क्याडमियम वा क्रोमेटहरू प्रयोग हुँदैन।
RAL प्लास्टिक: RAL प्लास्टिक प्लास्टिकको लागि मानक रंग हो। Polypropylene बाट बनेको मल्टिफंक्शनल प्लेटहरूले प्लास्टिकको लागि समान सावलीमा RAL पेन्ट शेडको उत्तम सम्भव रूपान्तरण सुनिश्चित गर्दछ। RAL प्लास्टिक P1 ले १०० मनपर्ने RAL क्लासिक र colorsहरू समावेश गर्दछ, जबकि RAL प्लास्टिक P100 ले २०० RAL डिजाइन र plasticहरू प्लास्टिकको मानकको रूपमा प्रदर्शन गर्दछ।
आन्तरिक सजावटमा यसको प्रयोग
RAL र range्ग दायरा उद्योगको बिभिन्न शाखामा अनुप्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको थियो र आन्तरिक डिजाइनमा अनुप्रयोगको लागि यति धेरै होइन। तपाई सायद सोच्दै हुनुहुन्छ कि यस उपद्रवले के बुझाउँदछ र किन यसको प्रयोग आन्तरिक डिजाइनमा ट्रान्सफर गरिएको छैन। यसको लागि सब भन्दा सम्मोहक कारण यो हो कि यसको रंग सीमा धेरै छ पेस्टल वा प्रकाश टोनमा सीमित, सजावट, आन्तरिक डिजाइन, आर्किटेक्चर, इत्यादिमा आधारित अन्य मापदण्डहरूको विपरीत।
RAL क्लासिक संग्रह को रंग को लागी एक मुख्य मापदण्ड हुनु पर्छ "प्राथमिक रुचि।" यसका धेरै र colorsहरू चेतावनी संकेत र ट्राफिक स signs्केतहरूमा प्रयोग गरिन्छ, वा सरकारी एजेन्सीहरू र सार्वजनिक सेवाहरूमा समर्पित हुन्छन्; उदाहरण को लागी: RAL 1004 (स्विस पोस्टल सेवा), RAL 1021 (अस्ट्रियन पोष्ट सेवा), RAL 1032 (जर्मन हुलाक सेवा)।
के यसको मतलब हामीले यसको लागि प्रयोग गर्न सक्दैनौं डिजाइन र अंदरूनी? होईन, यसले केवल स indicates्केत गर्दछ कि यो यसको लागि सब भन्दा उपयुक्त नहुन सक्छ। र यो गाह्रो हुन सक्छ कि कुनै आन्तरिक डिजाइन पेशेवरले काम गर्न र यस रंगको मानक ह्याण्डल गर्न सक्दछ वा कम से कम समान आवृत्ति वा सजिलोको साथ यो प्यानटोन मानकसँग गर्दछ।
के तपाईलाई RAL रंग प्रणाली थाहा छ? के तपाईंले बुझ्नुभयो यो कसरी काम गर्छ? के तपाईंले कहिल्यै यो प्रयोग गर्नुभएको छ? जैसा कि तपाईंले देख्नु भएको छ, तिनीहरूको रंग कार्डहरू र of्गको विस्फोट हो। कार्डहरू जुन तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तो कि अन्य प्रणालीहरूबाट कार्डहरू सस्तो मूल्यको लागि अधिग्रहण गरिएको छ यदि तपाईं यसको लाभ लिन सक्नुहुन्न भने। यदि तपाईंलाई एक परियोजनाको लागि आवश्यक पर्दछ भने, साथै, बिभिन्न विशेष कम्पनीहरू वा डिजाईन स्टुडियो जुन तपाईंसँग काम गर्नुहुन्छ यसले तपाईंलाई प्रदान गर्न सक्दछ सबैभन्दा उपयुक्त र colorsहरूमा छनौट गर्न र सहमत गर्न।
हामी मध्ये धेरैले यसलाई कहिले पनि प्रयोग गर्ने छैनौं, तर जान्नेले ठाउँ पाउँदैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » सजावट » डिजाइन » RAL रंग चार्ट: आफ्नो रंग छनौट गर्नुहोस्
तपाईंको घरको कुनाका लागि सजावट कुशन
तपाईको सजावटका लागि ११ तातो र color्ग योजनाहरू